Dameertu Geela Ha Didisee Qururuftay Kaga Dartay Odayaal ku Sheegga “Reer Xareed” By Kayse Nuur Xasan « SAWNEWS NETWORK
« Dufcadii Afaraad oo Ka Qalinjabisay MaantaXarunta Tababarada Xirfadaha Ee HAVOYOCO ee Magalada Boorama.
Odayada Makaahiil oo la kulmay gudida Beelaha reer Nuur »
Dameertu Geela Ha Didisee Qururuftay Kaga Dartay Odayaal ku Sheegga “Reer Xareed” By Kayse Nuur Xasan
Posted by Sawnews.tk on October 23, 2009
Dad badani waxay isweydiinayaan su’aasha ah. Dadkii maxaa ku dhacay?
Waxan isku sheegay odayaasha reer xareed tan loogama fadhiyin ee mid kale ayaan ka suagaynaa haddaan nahay Beelaha dhexe ee waddankan. Dadkani waxay ceebeeyeen magacayagii iyo dadnimo aan taariikh u lahayn. Waxa ku jira dad “Yiciis ah” oo dhaawac wayn u gaystay himiladii aan u soo halgannay. Rag wuu iska horyimaadaa oo wuu isdilaa, laakiin lama arag taariikhda dadkeenna wax dad aan waxba galabsan waddo u joogsada oo sidaa foosha xun u dila. Waa ceeb xad dhaaf ah. Waa gunnimo iyo nacasnimo. Waa xayaawaannimo dhab ah.
haddaanu nahay dadkan waddankan idinla degan ee weliba bahdiina ah waxan idinka sugaynay jawaab inaad ka bixisaan waxaa foosha xun. Lama garan karo caqli fayow inuu hanjabaad cusub keeno kii oo tii horeba foolxumadeeda sita. Haddaba suaasha aan is weydiinaynaa waxay tahay: Malaha dadkani ma garanaan dhibta ay geysteen xaddiga ay leedahay iyo raad xumada ay reebi karto. Aabahay wuxuu ku dhintay buuraha Ethopia, adeerkayna dagaalkii fagashta ayuu ku shahiiday. Waxad lumiseen:
-Himiladii aabahay iyo adeyrkay iyo tii kumanyaal kale oo ujeeddu u dhintay
-Nabadii waddankan lagu wada joogay
-Magacii beeshaydan ku faanaysay guusha
-Dadnimadii iyo naxariistii aadaminimo
-Gobanimo aan qayrkay ugu faani jiray oo aanan manta sheegan karin
-shuruucdii diinta Islaamka
-Qiimihii aqliga qofka ka soocayay kan xoolaha
Dadkii aad waxaas oo foolxumu ah u gaysateen arrimahan kor ku xusan oo dhan bay eegeen. Way ka xarragoodeen inay waxaad samyseen ku kacaan. Waa geesiyaal ammaan badan mutaystay, gacan nabadeed iyo middii walaalnimo ayaanan hawada u lalinayaa. Geesigu waa ka naftiisa ka adag ee leh argti dheer. Maaha fukuclaha waalan ee warranka la booda. Waxaad fasheen waa wax aad u sahlan u qof walba si dhib yar u samyn karo. Qof dadnimo meel uun ka soo galana, dadnimadiisa ayaa ka hor joogsata. idinku ma soo gashaane oo foolxumaad qurux mooddeenne.
Odayaal waxan idin leenahay maydinaan talin, manaydinaan baaqin ee sida xoolaha ayaad cideen. Waxad la garaad tihiin oo la daaqdaan xoolihiinna. Waxan si degdeg ah idiinka sugaynaa inaad noo soo sheegtaan dad iyo dugaag midka laydinku soo hagaago.
Kayse Nuur Xasan
This entry was posted on October 23, 2009 at 9:38 am	and is filed under Articals.